Talooyin ku saabsan diyaarinta kulan sawir qaadasho habeenkii ah | Abuurista khadka tooska ah
Talooyin ku saabsan diyaarinta cashar sawir qaadasho habeen ah
Fran Marin | | Sawir, Dhiirrigelinta
Sawir qaadista dabiiciga ah waxaa lagu gartaa inay tahay nooc sawir ah oo ay saameyn ku leeyihiin tiro badan oo arrimo dibadeed ah. Waxaa jira waxyaabo ka baxsan xakamayntayada, wax aan ka dhicin sawir qaadista istuudiyo tusaale ahaan. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaan isku dayno inaan sii odoroso xaalado iyo duruufo gaar ah si aan uga faa'iideysano waqtiga saxda ah ugana faa'iideysanno shaqadeena iyo waqtigeenna. Waxaa jira daqiiqado aysan suurtagal ahayn in la helo sawirro aan caadi ahayn iyo daqiiqado ay duruufaha aan u baahanahay ku jiraan. Tan horay u sii ogaanshaha waxay na siin doontaa faa iido weyn gaar ahaan haddii ay tahay fadhiga sawir qaadista habeenkii.
Kadib Waxaan soo jeedinayaa talooyin taxane ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad sameyso geeddi socodka dheecaan badan, fudud oo sax ah:
1 Booqo masraxa kahor intaadan sameysan si aad u bilowdo casharkaaga
2 Hubi saadaasha hawada
3 Xisaabi masaafada sare
4 Taxaddar yeelo oo iskuday inaad ogaato
Booqo masraxa kahor intaadan sameysan si aad u bilowdo casharkaaga
Booqashada goobta inta lagu jiro maalinta ayaa naga caawin doonta inaan qorsheyno kalfadhigeenna si aad u wanaagsan iyo inaan ogaano waxyaabaha ay ka kooban yihiin masraxa, juqraafi ahaan meeshu leedahay iyo meelaha ugu habboon ee aan iskuday gelin karno kamaraddeena. Waxa ku saabsan ayaa ah in la baaro fursadaha ay meeshu na siiso si aan ula kulanno dhibaatooyinka suurtagalka ah ee dhici kara. Hadday tahay meel cusub oo adiga kugu habboon, waxaa lagugula talinayaa inaad sawir ballaaran ka qaaddo si aad ugu qorshayn karto guriga iyo adigoo niyadda ku haya degganaan ballaaran qorshahaaga iyo meelaha aad qabsan doontid.
Hubi saadaasha hawada
Internetka waxaa ku yaal bogag badan oo kaa caawin doona inaad si sax ah u ilaaliso cimilada. Waa inaan kormeerno aagga iyo waqtiga aan qorsheyneyno inaan aadno. Dareenkaan, waa inaan isku daynaa inaan helno macluumaadka ugu saxsan si looga fogaado waxyaabaha layaabka leh. Waa kuwan qaar ka mid ah aaladaha internetka, qaar badan oo ka mid ahi waxay bixiyaan macluumaadka noocan ah waqtiga dhabta ah.
Cimilada: Beddelkaani wuxuu na siinayaa ikhtiyaarka ah inaan la tashanno saadaasha hawada oo wadar ahaan sax ka ah aag kasta oo adduunka ka mid ah. Waxa kale oo ku jira ikhtiyaarka ah inaad hubiso maalinta saxda ah iyo waqtiga.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale na siineysaa suurtagalnimada helitaanka khariidado kala duwan oo cabiraya doorsoomayaasha kala duwan sida roobka, heerkulka, daruuraha ama dabaysha. Sidan oo kale waxaan ku yeelan karnaa fikrad sax ah oo ku saabsan sida duufaanku u soo baxayo inta lagu jiro muddada kal-fadhiga oo dhan.
Intaas waxaa sii dheer, la tashiga miisaska bilaha ayaa na siin doona macluumaad sax ah oo aad u khuseeya tan iyo markii aan ogaan doonno dhab ahaan marxaladda dayaxu ku jiro iyo goorta uu kacayo. Waxaa jira bogag badan oo bixiya macluumaadka noocan oo kale ah oo ay ka mid yihiin saacadaha xagaaga iyo qorrax dhaca qorraxda iyo weliba dayaxa maalin kasta oo bisha ah iyo goob kasta juquraafi ahaan. Waxay sidoo kale bixiyaan macluumaad laxiriira da'da, wajiga dayaxa iyo boqolkiiba iftiinka. Dhinaca kale, waxaa lagugula talinayaa inaad soo dejiso barnaamijyo heer sare ah sida Stellarium si aad wax badan uga ogaato xiddigaha, xiddigaha iyo meeshooda.
Barnaamij kale oo sidoo kale xiise u yeelan kara noocan casharka ah waa Sawir qaadaha 'Eldmeris', oo uu naqshadeeyay sawir qaade caan ah oo dhanka muuqaalka ah kaasoo naga siin doona macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ephemeris-ka qorraxda iyo dayaxa. Waxaan si fudud ugu qasbanaaneynaa inaan dhigno mowqifkeena khariidada waxayna si toos ah u tilmaami doontaa khadadka ephemeris meesha ay xiddigaha ka soo baxayaan oo dhigayaan. Hawlaha ay ka mid tahay, suurtagalnimada in la ogaado xitaa saadaasha hooska iyo nalalka ka dhici doona goobteenna maalin iyo habeenba waa mid soo jiidasho leh. Shaki la'aan waa qalab dhameystiran in wax walba lagu xakameeyo qaab milimitir ah. Waxaa loo heli karaa kombuyuutarrada iyo taleefannada gacanta iyo kiniiniyada labadaba.
Xisaabi masaafada sare
Waa inaan sidoo kale tixgelin siino haddii kal-fadhigeennu u baahan doono masaafada sare iyo haddii ay dhacdo markaa waxaan u baahan doonnaa inaan qaadno xisaabinta qaarkood si aan ugu dhaqan-gelinno una dooranno halbeegyada ugu habboon. Waxaa jira boggag internet oo fara badan oo kaa caawin doona fududeynta hawshan. Midkood waa Dofmaster kaas oo aan ka abuuri karno miis tixgelinaya xuduudaha sida masaafada, nooca dareemayaasha ay kamaraddeenu leedahay iyo nooca. Kuwani waa gebi ahaanba xisaabiyayaal xisaabiyaha internetka ah si ay ula jaan qaadaan xisaabinta duruufahayaga. Natiijooyinka ka sakow, waxa kale oo ku jira jaantusyo taxane ah ama qoraallo naga caawin doona inaan si fiican wax walba u fahanno.
Taxaddar yeelo oo iskuday inaad ogaato
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, maskaxda ku hay in iyadoo ku xiran hadba aagga ay tahay, fadhiga noocan ah uu noqon karo mid ka khatar yar ama ka khatar yar. Hadday tahay su'aal ku saabsan bay'adaha dabiiciga ah, waxay ku socotaa iyadoo aan la oran marka hore waa inaan si fiican nafteena ugu sheegnaa nooca faunaha ku nool meesha, haddii ay lagama maarmaan noqoto inaan qaadno qalab gaar ah oo aan tixgelinno qodobbada lagama maarmaanka ah haddii waa inuu noqdaa fadhi waqti dheer ah. Waxaa lagugula talinayaa inaan isku dayno inaan la shaqeyno habeenada dayax madoobaadka maxaa yeelay cadeynta ay bixiso iyo isku dayida inaan damino iftiin kasta markaan dhaqaaqno maxaa yeelay hadii kale aragtideena ayaa si dhib la’aan ah u xanuunsaneysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Talooyin ku saabsan diyaarinta cashar sawir qaadasho habeen ah
Adobe Lightroom Mobile waxaa laga heli karaa bilaash Android
+ 20 jees jeeska dharka dumarka (PSD)